Maxkamada dalka Yeman oo xukuntay in la kala qeybiyo guriga qunsulka Soomaaliya ee magaalada Cadan – idalenews.com
Maxkamada dalka Yeman oo xukuntay in la kala qeybiyo guriga qunsulka Soomaaliya ee magaalada Cadan
Go`aanka soo baxay maxkamad ku taala magaalada Cadan ee dalka Yeman taas oo Gacanta ku haysay dacwada dhismaha qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Caden .
Waxaa maanta oo Talaado ah kuna beegan 15 Jan 2013 , mas’uuliyiinta Qunsuliyada looga yeeray in ay hortagaan maxkamada oo mudo soo socotay si ay ugu dhawaaqdo go’aanka kama danbeysta ah ee dhismaha qunsuliyada iyo lahaanshiyaheeda.
Taasoo soo saartay 5 Qodob oo milkiilanimada xarunta qunsuliyada qeyb ka mid ah ku wareejinaya dad udhashay dalka Yemen sida uu warbaahinta Qaranka u xaqiijiyay Qunsulka guud ee Qunsuliyada Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Cadan Axmed Cabdi Xassan “Axmed Suudaani”.
1. In dhismaha qunsuliyada ay kala qaybsadaan labada dhinac ( dawladda Soomaaliya iyo qolada sheeganaysa milkiyadda guriga ). Si simana loo qaybsado Guriga , qori tuurna lagu kala qaaato labada qaybood .
2. In hadii sidaa lagu kala baxo ay qunsuliyadda ku wareejiso qolada kale asliga dukumiintiga lahaanshaha guriga oo hadda gacanta qunsuliyadda ku jira.
3. In labada dhinaca uu mid waliba dusha saarto bixinta qarashkii ka galay dacwada .
4. Labada dhinac waxa ay xaq uleeyihiin inay qaataan Abiil , marka gacanta loo galiyo go`aanka maxkamada oo qoraal ah , go`aankaas oo soo bixi doona bil ka dib .
5. Sidoo kale , labada dhinaca waxaa la siiyey mudo 2 bilood ah , oo ay ku soo Gudbin karaan abiilka ay ka qaateen go`aanka maxkamada.
Qunsulka guud ee Qunsuliyada Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Cadan Axmed Cabdi Xasan “Axmed Suudaani” ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go’aankaasi maadama sida uu xusay mudo kabadan 40 sano ay gacanta kuheysay guriga dowladda Soomaaliya taas oo meesha ka saareysa dadka xiligan sheeganaya milkiyadiisa waxa uuna intaa ku daray in kooxahan ay ka faa’iideysanayaan khalalaasaha kasocda wadanka Yemen taasoo maxkamadaha madax baneysay.
Sidoo kale Qunsulka ayaa tilmaamay in ay dowladda Yemen kala hadli doonaan sidii loo badbaadin lahaa hantida Soomaaliyeed isagoo xusay in dowladda Soomaaliyana ay dhankeeda difaaci doonto hantida.
Gudoomiyaha G/Banaadir oo ka qeyb galay munaasabad xariga loo jarayay machad cusub oo ka shaqeeya cilmi baarista dalkeena
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere oo markii u horeysay ka hadlay howl galkii fashilmay ee Buulo Marer